နားထောငျကောငျးလှနျးလို့ မကျြရညျပါကရြလောကျမယျ့ သီခငျြးလေးတဈပုဒျကို သီဆိုပွခဲ့တဲ့ ကိုပေါကျ – Maythadin
ကိုပေါကျဟာ အနုပညာ လောကထဲမှာ ဇာတျပို့ ဇာတျရံကောငျး တဈယောကျ အနနေဲ့စတငျ လာခဲ့ ပွီးတော့အခု နောကျပိုငျး မှာတော့ အောငျမွငျ တဲ့ သရုပျဆောငျ၊ ဒါရိုကျတာ တဈ ယောကျ ဖွဈလို့ နခေဲ့ပါပွီ။
ကိုပေါကျဟာ မွနျမာ နိုငျငံမှာ အာဏာသိမျးမှု စတငျ ဖွဈပျေါကတညျးကပွညျသူတှေ နဲ့ အတူတဈသားတညျး တဈစိတျတညျး ရပျတညျကာ CDM မှာလဲ ပါဝငျ ခဲ့ပွီးလူထု ဆန်ဒထုတျဖျောပှဲတှမှောလဲ ပွညျသူတှေ နဲ့အတူ တဈရကျမှ မပွတျ တိုကျပှဲ ဝငျ နခေဲ့ တာပဲ ဖွဈ ပါတယျ။
ကို ပေါကျ အပါအဝငျ အနုပညာ ရှငျ အခြို့ CDM အရေး တကျကွှ လှုပျရှားမှု ကွောငျ့ ပုဒျမ ၅၀၅(က)နှငျ့ အမှုဖှငျ့ ခံခဲ့ရပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့မို့လညျး အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားလညျး လှတျမွောကျနယျမွကေိုရောကျရှိနကွေပွီဖွဈပါတယျနျော..
မကွာခဏလဲ ကိုပေါကျက လှတျမွောကျနယျမွကေ ပုံလေးတှကေိုလညျး တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ.ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ကိုပေါကျက ဂဈတာတီးပွီး သီခငျြးကိုကိုယျတိုငျ သီဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတဈခုကိုတငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ
ဒါ့ကွောငျ့မို့လညျး အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားလညျး လှတျမွောကျနယျမွကေိုရောကျရှိနကွေပွီဖွဈပါတယျနျော..မကွာခဏလဲ ကိုပေါကျက လှတျမွောကျနယျမွကေ ပုံလေးတှကေိုလညျး တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ.
ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ကိုပေါကျက ဂဈတာတီးပွီး သီခငျြးကိုကိုယျတိုငျ သီဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတဈခုကိုတငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ. …ပရိသတျကွီးလညျး သီခငျြးလေးကိုနားဆငျပွီးတော့ အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော crd
ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရေ ပြည်သူချစ် အနုပညာ ရှင် တစ်ယောက် ဖြစ် တဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်ဟာ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) နဲ့ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ အတွက်ကြောင့် ယခု လတ်တလောမှာတော့ တိမ်းရှောင်နေ ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုပေါက်ဟာ အနုပညာ လောကထဲမှာ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံကောင်း တစ်ယောက် အနေနဲ့စတင် လာခဲ့ ပြီးတော့အခု နောက်ပိုင်း မှာတော့ အောင်မြင် တဲ့ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ တစ် ယောက် ဖြစ်လို့ နေခဲ့ပါပြီ။
ကိုပေါက်ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အာဏာသိမ်းမှု စတင် ဖြစ်ပေါ်ကတည်းကပြည်သူတွေ နဲ့ အတူတစ်သားတည်း တစ်စိတ်တည်း ရပ်တည်ကာ CDM မှာလဲ ပါဝင် ခဲ့ပြီးလူထု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေမှာလဲ ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ တစ်ရက်မှ မပြတ် တိုက်ပွဲ ဝင် နေခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ်။
ကို ပေါက် အပါအဝင် အနုပညာ ရှင် အချို့ CDM အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားမှု ကြောင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)နှင့် အမှုဖွင့် ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်မို့လည်း အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်နော်..
မကြာခဏလဲ ကိုပေါက်က လွတ်မြောက်နယ်မြေက ပုံလေးတွေကိုလည်း တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်.ဒီနေ့လေးမှာတော့ ကိုပေါက်က ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းကိုကိုယ်တိုင် သီဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒါ့ကြောင့်မို့လည်း အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း လွတ်မြောက်နယ်မြေကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်နော်..မကြာခဏလဲ ကိုပေါက်က လွတ်မြောက်နယ်မြေက ပုံလေးတွေကိုလည်း တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်.
ဒီနေ့လေးမှာတော့ ကိုပေါက်က ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းကိုကိုယ်တိုင် သီဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်. …ပရိသတ်ကြီးလည်း သီချင်းလေးကိုနားဆင်ပြီးတော့ အားပေးစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော် crd